بهترین کانال های تلگرامی دانلود فیلم ؛‌ سینما در دسترس شماست! - مجله خبری ای بی سی مگ
Ny fampidinana sarimihetsika avy amin’ny loharano tsara indrindra dia iray amin’ireo ahiahin’ireo mpankafy sinema. Miaraha aminay amin’ny fampidirana ireo fantsona fampidinana sarimihetsika Telegram tsara indrindra.
Ny fitomboan’ny fandrosoana amin’ny rindrambaiko Telegram dia nahatonga ny lazan’ity fampiharana ity hitombo isan’andro eo amin’ireo tambajotra sosialy finday. Ny toetran’ny Telegram amin’ny loharano misokatra, ary koa ny fanavaozana haingana sy ny fitaovana omeny ny mpifandray aminy, dia tena manan-danja tokoa ho an’ireo mpampiasa Iraniana.
Ny fahafahana mamorona fantsona dia iray amin’ireo endri-javatra manan-danja sy manintona indrindra amin’ny Telegram izay nahatonga ny mpampiasa maro hiankin-doha amin’ny Telegram. Ho fanampin’ny fantsona fialamboly, fanabeazana ary fampahalalam-baovao, ny lafiny manan-danja amin’ny asan’ny fantsona telegrama dia ny fanomezana serivisy, fandraharahana na varotra. Ny fantsona sasany toy ny Ny fantsona tsara indrindra amin’ny Telegram Exchange Mavitrika eo amin’ny sehatry ny fampianarana izy ireo. Misy koa anefa tia Fantsona sy vondrona Telegram Mahazo vola Telegram Fisolokiana ny ankamaroany.
Mandritra izany fotoana izany, ny mponina 40 tapitrisa mpampiasa Telegram ao Iran dia mijoro ho vavolombelona fa ireo iraka ireo dia tsy vitan’ny hoe malaza be, fa koa sehatra tena tsara ho an’ny hetsika toy izany mba hiroborobo amin’ny endrika fantsona Telegram. Anisan’ireo fantsona azo heverina ho mifandray amin’ny fialamboly ny votoatiny dia ny fantsona fanolorana sarimihetsika, andian-tantara ary mozika. Amin’ity lahateny ity dia tianay ny hampahafantatra anao ny fantsona fandefasana sarimihetsika telegrama tsara indrindra.
Ny fantsona telegrama tsara indrindra hisintonana sarimihetsika
Samy mahatsiaro ny andro tsaran’ny Tiny Movies miaraka amin’ny fisentoana sy nenina ny mpijery sarimihetsika. Ny references tsara indrindra, feno indrindra ary haingana indrindra amin’ny fampidinana ny sarimihetsika farany indrindra eran’izao tontolo izao miaraka amin’ny dikanteny tsara indrindra ary na dia tsy manitatra aza, indraindray miaraka amin’ny dubbing persiana, dia tsara kokoa noho ny Radio sy TV tamin’izany fotoana izany ihany ary Sarimihetsika Tiny. Ny vanim-potoana Tyne Movies anefa dia nifarana tamin’ny fomba ratsy indrindra.
Taorian’ny TinyMovies, tranonkala maro no nanolotra sarimihetsika sy andian-tantara vahiny, saingy tsy nisy tamin’izy ireo afaka niasa tamin’ny ambaratonga TinyMovies. Na ahoana na ahoana, na inona na inona, dia naman’ny fihetsiketsehana sinema izy ireo.
Tsy mitovy anefa ny zava-misy. Efa elaela izay no lasa tsy azon’ny mpampiasa ny tranokala fampidinana sarimihetsika malaza. Rehefa afaka kelikely dia niverina ny sasany tamin’izy ireo ary tsy azo ampiasaina intsony amin’ireo tranonkala ireo ny rohy fampidinana ilay sarimihetsika. Niitatra ny adihevitra momba ity olana ity hatramin’ny nipoiran’ny minisitry ny Serasera eny fa na dia ny rindrambaiko Chen Filmio sy Nemava aza. Mazava ho azy fa nandà ny tsy manana anjara mivantana amin’ity raharaha ity ireo voampanga rehetra.
Na izany na tsy izany, nandritra io fotoana io, farafaharatsiny ho ahy sy ny namako sasany, dia nipoitra ny olana fa ny fantsona telegrama dia mety ho loharano manan-danja amin’ny fampidinana sarimihetsika. Rehefa avy nikaroka kely aho dia tsapako fa izaho no tao ambadiky ny caravan ary tsy nanaraka afa-tsy ny fampidinana ilay sarimihetsika avy amin’ireo tranonkala voalaza ireo aho.
Efa nisy hatry ny ela ny fantsona fampidinana sarimihetsika Telegram, nanana mpampiasa maro izy ireo ary nanome votoaty amin’ny hetsika tsy tapaka. Noho izany dia nanapa-kevitra izahay ny hizara ity traikefa ity aminao ary amin’ity lahateny ity dia hampahafantarana ireo fantsona fampidinana sarimihetsika telegrama tsara indrindra.
Lisitry ny fantsona Telegram tsara indrindra hisintonana sarimihetsika:
Sarimihetsika Channel 2 Sarimihetsika
Film 2 Movie Telegram Channel, izay an’ny tranokala mitovy anarana, dia manolotra sarimihetsika sy andian-tantara vahiny tsara indrindra sy manara-penitra maimaim-poana. Manana mpikambana 161,000 ity fantsona ity ary manolotra tsy tapaka sarimihetsika sy dikanteny isan-karazany amin’ny toetra samihafa ho an’ny mpampiasa azy isan’andro.
Channels mpilalao sarimihetsika
Anarana malaza amin’ny sarimihetsika Friends Channel. Ity fantsona ity miaraka amin’ny ID Filmbazan ary mpikambana maherin’ny 68 arivo dia iray amin’ireo fantsona telegrama be mpampiasa indrindra amin’ny sehatry ny sinema.
Sarimihetsika Channel 7
Ny fantsona Film 7 misy mpikambana 116 arivo dia iray amin’ireo fantsona telegrama vaovao indrindra mavitrika amin’ny sehatry ny sarimihetsika sy serial. Ity fantsona ity dia manome rakitra video isan’andro, dikanteny ary famaritana fohy ho an’ireo mpampiasa azy.
Ny horonan-tsarimihetsika vaovao sy ny fantsona serial miaraka amin’ny ID SERIAL & MOVIES miaraka amin’ny mpikambana arivo eo ho eo dia iray amin’ireo fantsona fandefasana sarimihetsika telegrama mavitrika sy tsara indrindra. Ity fantsona vaovao ity dia nahasarika mpampiasa mahazatra maro tao anatin’ny fotoana fohy.
Sarimihetsika & andian-tantara an-tranonkala
Ity fantsona ity koa dia iray amin’ireo fantsona tranainy indrindra eo amin’ny sehatry ny fanomezana sarimihetsika sy andian-tantara ho an’ireo mpampiasa azy ary nanana hetsika tsara tamin’ity sehatra ity. Ity fantsona ity na ID mitovy ary mpikambana 16,000 eo ho eo no hita ao amin’ny Telegram.
IMovie Channel dia iray amin’ireo horonan-tsarimihetsika feno sy fantsona fandefasana serial ao amin’ny Telegram. Na dia tsy hita araka ny tokony ho izy aza ary angamba, fa ankoatra ny fanolorana sarimihetsika sy andian-tantara dia manaraka ny vaovao mifandraika amin’ny sarimihetsika sy ny mpilalao.
Fantsona Sarimihetsika iray misy mpikambana maherin’ny 14.000 no iray amin’ireo fantsona hafa eo amin’ny sehatry ny fampidinana sarimihetsika sy andian-tantara ary fanarahana ny vaovao momba ny sarimihetsika. Ity fantsona ity dia manolotra karazana sarimihetsika sy andian-tantara isan-karazany amin’ny toetra samihafa.
Avy amin’ny tranokala mitovy anarana ny Channel Channel. Ny tranokalan’ny Dostiha dia iray amin’ireo mpikatroka tranainy amin’ny sehatry ny sinema sy ny fanaovana dubbing amin’ny sarimihetsika ary ny serial. Ny fantsona Telegram Friends koa dia asan’ny hetsika amin’ny tranokala ary natokana hanomezana votoaty video misy mpikambana 33.000.
Ny fantsona fandefasana sarimihetsika Telegram tsara indrindra
Fantsona fampidinana sarimihetsika sy serial maimaim-poana
Fantsona fampidinana sarimihetsika sy andian-tantara maimaim-poana misy mpikambana 235 arivo, raha jerena ny isan’ny mpikambana ao amin’ireo fantsona amin’ity sokajy ity, dia manana laza manokana. Angamba ny iray amin’ireo antony mahatonga ny fahombiazana sy ny lazan’ity fantsona ity eo amin’ny mpampiasa dia ny maha-maimaim-poana ny misintona sarimihetsika sy andian-tantara Iraniana, izay azo alaina amin’ny vola amin’ny ankamaroan’ny tranonkala sy ny manampahefana ara-dalàna.
Iran Film Channel
Iran Film, mitovy amin’ny lohateny sasany ao amin’ny lisitray, dia nampahatsiahy anay voalohany ny tranonkala malaza sy tranainy mitovy anarana ary mavitrika amin’ny sehatry ny sarimihetsika sy andian-tantara. Tamin’ny ezaka nataonay dia tsy nahita fifandraisana mazava teo amin’izy roa izahay.
Na izany aza, ny fantsona Ira Film dia miasa miaraka amin’ny mpikambana 28.000 eo amin’ny sehatry ny fanomezana sarimihetsika sy andian-tantara ho an’ireo mpampiasa azy. Ny ID amin’ity fantsona ity dia Iranfilm.
Sarimihetsika sy andian-tantara vaovao
Ny fantsona sarimihetsika sy andian-tantara vaovao misy mpikambana 23.000 fanampiny dia natokana hanolotra sarimihetsika sy andian-tantara Iraniana ary manaraka ny vaovao momba ny sinema ao an-toerana. Raha mpankafy sinema an-trano ianao dia manoro hevitra anao izahay hiditra amin’ity fantsona ity.
Ity fantsona ity koa dia an’ny tranokala mitovy anarana sy famantarana. Ity fantsona misy mpikambana maherin’ny 40.000 ity, ankoatra ny fanolorana rakitra sarimihetsika sy ny fanarahana ny vaovao momba ny andron’ny sinema, dia mamerina mijery ny votoatin’ny sarimihetsika ihany koa ary afaka nanam-potoana nahomby tamin’ity sehatra ity.
Filment News Channel
Net News Film Channel dia iray amin’ireo fantsona Telegram tsara indrindra hisintonana sarimihetsika sy andian-tantara. Ity fantsona ity, mazava ho azy, araka ny anarany, dia miresaka bebe kokoa momba ny vaovao momba ny sinema sy ny mpilalao sarimihetsika, ary amin’ity tranga ity, dia tsy manana rafitra manokana. Ny vaovao momba ny sinema ao an-toerana sy any ivelany, ankoatry ny vaovao amin’ny fahitalavitra ao an-toerana sy ny andian-tantara malaza amin’ny fahitalavitra, dia ampahany manan-danja amin’ny hetsika ataon’ny fantsona.
Ny fantsona sinema dia iray amin’ireo tranga hafahafa mihetsiketsika amin’ity sehatra ity ihany koa. Ity fantsona ity dia manana mpikambana efa ho 16,000 ary, toy ny fantsona hafa mavitrika amin’ity sehatra ity, dia manolotra rakitra sarimihetsika sy serial amin’ny toetra samihafa. Fa ny iray amin’ireo zavatra hafahafa amin’ity fantsona ity dia ny fiteny miasa, dia ny teny anglisy. Raha miteny persiana avokoa ny mpampiasa an’ity fantsona ity, aleon’ny mpitantana ny fantsona manolotra ny atiny amin’ny teny anglisy.
Sarimihetsika telegrama sy fantsona serial
Aza velominao ny fantsona an-tranonao mba hamitahana ny tambajotra an-tranonao. Izany no nitranga tamiko, ary nanantena aho fa hihaona amin’ny fantsona iray izay voafetra amin’ny tambajotra an-trano ny sehatry ny asa. Saingy rehefa nahita ny fantsona aho, ny hany tsy teo dia ny andian-tsarimihetsika an-trano. Ity fantsona ity, toy ny mahazatra, dia manolotra sarimihetsika sy andian-tantara vahiny amin’ny toetra samihafa ary manana mpikambana maherin’ny 13.000.
Ny fantsona Segram miaraka amin’ny ID seegram, izay fitambaran’ny teny hoe cinema, mahita ary telegrama, dia iray amin’ireo fantsona malaza sy mavitrika indrindra amin’ny sehatry ny sinema. Ity fantsona ity koa dia iray amin’ireo fantsona vaovao amin’ity sehatra ity izay afaka nahazo laza manokana teo amin’ireo mpampiasa tao anatin’ny fotoana fohy.
Amin’ity fantsona ity, ho fanampin’ny fidirana amin’ny harenan’ny sarimihetsika Hollywood farany indrindra, azonao atao koa ny manaraka ny vaovao momba ny andron’ny sinema.
Star Uncle Channel, tsy toy ny Uncle Channels mavitrika amin’ity sehatra ity, dia tsy natokana ho an’ny fanolorana vaovao, sarimihetsika ary andian-tantara vahiny fotsiny. Ho fanampin’izany, ity fantsona ity dia manolotra andian-tantara Iraniana tamin’ny andro sy andian-tantaran’ny tambajotra fampisehoana an-trano.
Fantsona sarimihetsika sy andian-tantara maimaim-poana
Ny fantsona sarimihetsika sy andian-tantara maimaim-poana miaraka amin’ny mpikambana 7,000 mahery dia fantsona malaza sy mavitrika amin’ny sehatry ny sarimihetsika sy andian-tantara. Ho fanampin’ny fanomezana rakitra sarimihetsika persiana sy dikanteny amin’ny toetra isan-karazany, ity fantsona ity koa dia manaraka ny vaovao momba ny andron’ny sinema ary manome afisy tsara amin’ny sarimihetsika malaza.
Sarimihetsika sy fahitalavitra Iraniana sy vahiny
Ny fantsona hafa mandrakotra tsara ny sinema ao an-toerana sy any ivelany ary ankoatra izany dia tsy hangataka sarany ianao hisintonana sarimihetsika sy andian-tantara ao an-toerana dia ny fahitalavitra sy ny andian-tantara Iraniana sy vahiny.
Ity fantsona ity na mpikambana efa ho iray alina no iray amin’ireo fantsona malaza sy mavitrika indrindra amin’ity sehatra ity.
Tsy rariny raha tsy lazaina ny fantsona fampidinana Tiorka. Tena malaza amin’ny Iraniana ankehitriny ny sarimihetsika sy andian-tantara Tiorka. Tany am-piandohana tao amin’ny fangatahana mitokana hampahafantarana Ny serial Tiorka tsara indrindra Nandoa vola koa aho tamin’ny kabary Ny andian-dahatsoratra Jam TV tsara indrindra Niresaka momba ny andraikitry ny fantsona zanabolana amin’ny fitomboan’ny lazan’ny andian-tantara Tiorka izahay.
Na izany na tsy izany, araka ny antontan’isa, ny serialization sy ny serialization any Torkia dia tsy zavakanto sy fialamboly fotsiny, fa angamba mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra, ara-barotra sy indostrialy, ary amin’ny raharaha Tiorkia, dia tokony hiresaka momba ny indostrian’ny sarimihetsika fa tsy ny zavakanto sinema. . Ny ampahany manan-danja amin’ny fidiram-bolan’i Torkia dia avy amin’ny fanaovana ireo sarimihetsika sy andian-tantara ireo.
Na izany aza anefa dia tena nalaza be teo amin’ireo mpiray tanindrazana ireo andian-tantara ireo. Noho izany antony izany dia nanapa-kevitra ny hampahafantatra anao ity lisitry ny fanondro manokana ity aho mba hidirana amin’ny andian-tantara Tiorka. Ity reference ity dia fantsona telegrama mitovy amin’ny ID mitovy, izany hoe Turkdl. Ity fantsona ity, izay misy mpikambana maherin’ny 18.000, dia miasa manokana amin’ny sehatry ny sinema Tiorka ary mety ho loharano tsara ho an’ireo tia sinema Tiorka.
Fantsona Telegram Serial Vaovaon'ny Sarimihetsika